Mpanamboatra sy mpamatsy kitapo fanampiana voalohany an'i China Summit
OEM, ODM dia tongasoa
logo silkscreen (fanaingoana)
Famokarana: KIT AIDA VOALOHANY
Fampiharana: Fitaovana fanampiana voalohany ity fna ny ankamaroan'ny fampiasana na adventures isan'andro, ao anatin'izany ny: trano, birao, filasiana, fiara, trano fisakafoanana, fiara fitateram-bahoaka, lakana, sambo, dia lavitra, toeram-piasana sy sekoly etc.
Ny kitapo vonjy taitra dia hanome anao vahaolana amin'ireo tsy ampoizina isan'andro tsy ampoizina ary eny an-tany efitra aza dia misy ny trauma trauma, izay misy: fitsangantsanganana an-dranomasina mandritra ny iray volana, lozam-pifamoivoizana kely ary hadisoana isan'andro ataon'ny zazakely. Tehirizo ao anaty kitapo, kitapo fonon-tànana na kabinetra ara-pahasalamana ity kit ity ho an'ny vahaolana haingana sy mora amin'ny toe-javatra maika.
Fitaovana: 400D / 600D polyester na fanaingoana
Loko: misy mena / Volondavenona / Aqua, fanaingoana
Size: 10 x 3 x 13cm, na fanaingoana
Tehirizo: Ataovy madio sy maina foana.
Ny kitapo fanampiana voalohany dia namboarina tamin'ny habeny mahafatifaty, 10x3x13cm, mora be raisina sy entina amin'ny fampiasana anatiny sy ivelany. Ny mpizarazara anaty dia afaka mitazona zavatra ilaina mafy sy milamina amin'ny toe-javatra tsy ampoizina.
Misy pirinty logo.
Manome serivisy OEM & ODM ihany koa izahay, raha mitady habe, fitaovana, loko, fananganana anaty isan-karazany ianao, azafady aza misalasala mifandray aminay eto, hanome serivisy fijanonana tokana ho anao izahay.
Ny vokatra dia tsy ao anatin'izany ny akora fanampiana vonjy taitra ao anatiny. Ity entana ity dia kely habe amin'ny fampiasana fotoana fohy, raha mitady habe lehibe kokoa ianao dia tsindrio azafady ireo rohy ho an'ny zavatra hafa ao amin'ny tranonkalantsika, na miarahaba anao hifandray aminay ho fampandrosoana.
A4: vokatra isan'andro> 10,000pcs, ny fotoana fandefasana dia 20 ~ 25 andro, manana milina fanindronana mihoatra ny 60 izahay hanohanana ny fivoarana sy ny fandefasana haingana.
F5: Azoko atao ve ny manonta ny anay logo amin'ny ny vokatra?
A5: Ie, azo antoka. Azafady mba omeo ny kanto, dia hamboarinay ny fankatoavana alohan'ny fitaovana.
F6: Azoko atao ve ny manafatra santionany sasany?
F7: Inona ny MOQ anao (Minimum Order Quantity)?
F8: azonao atao ve ny manamboatra ny ahy famolavolana?
A8: Eny, manolotra serivisy OEM sy ODM izahay.
Manana ekipa R&D matanjaka sy trano fampitaovana izahay hanohanana ny fampandrosoana.
Avy amin'ny sary, prototype, fitaovana, santionany, fitsapana fiasa ary famokarana tsindrona dia ataontsika rehetra ao an-trano. Aza misalasala mifandray aminay raha mila antsipiriany.
Ny kitapo vonjy taitra dia hanome anao vahaolana ho an'ny tsy fahita isan-karazany tsy ampoizina isan'andro ary na dia ny toe-javatra misy trauma any anaty ala aza, izay misy: ny dia an-dranomasina lava, ny lozam-pifamoivoizana kely ary ny zazakely isan'andro
Previous: Boaty fitahirizana sarontava
Manaraka: Kitapo fanampiana voalohany
Kitapo vonjy taitra ho an'ny mpamonjy voina
Kitapo vonjy maika
Kitapo kitapo vonjy taitra vonjy maika
Kitapo vonjy maika voalohany
Kit Vonjy Voina Voaloham-bidy
Kitapo fanampiana voalohany ho an'ny vonjy taitra
AIDA VOALOHANY KIT FB003
AIDA KIT FB005 voalohany
AIDA KIT FB006 voalohany
KIT AIDA VOALOHANY
AIDA VOALOHANY KIT FB002